Iprofayile yeNkampani | Imveliso ye-Anping County Kaixuan yeeNtsimbi ezingenazintsimbi Co., Ltd.
Thina, imveliso kunye urhwebo combo, ukuvelisa kunye nokuthunyelwa umbhobho izixhobo kunye neevalvu ibhola ukususela ngo-2002, ingakumbi ukugxila izixhobo umbhobho steel stainless kunye neevalvu ibhola steel stainless.
Siliqela elinabanikazi bosapho, uMnu Yan bazalwana baseke i-KX Co (i-Anping County KaiXuan iimveliso zentsimbi engenazintsimbi Co., Ltd.) kwaye bakha isityalo ngo-2002. uphuhliso, isicwangciso, kunye nentengiso.
Umzi-mveliso wethu weMveliso
Umzi-mveliso wethu ugubungela indawo yeemitha zesikwere ezingama-20000, ukuphosa iworkshop yeemitha zesikwere ezingama-5000, umasifundisane ngomatshini weemitha ezili-5000 zesikwere.
Ingxelo yonyaka yeNgeniso
Ukubonelela abathengi ngezona mveliso zibaluleke kakhulu kunye neenkonzo.
Ukubonelela elona thuba lilungileyo labasebenzi kwinqanaba ngalinye lomsebenzi wabo wokusebenza iiyure ezinde kunye nezinzima ukufikelela kwinqanaba eliphezulu. Ukuphucula umgangatho wentlalo wobomi. Ukwakha ishishini lethu ekubeni libe lishishini eliphambili ukwandisa imveliso kunye nokudala imisebenzi emitsha, ukudala unikezelo olukhuselekileyo lweempahla kunye neenkonzo ezinakho ukuhlangabezana neemfuno zekamva.
Ukwenza ubomi obuzinzileyo obuphezulu kubo bonke abasebenzi kunye neentsapho zabo.
Sinikezela ngeemveliso ezibalaseleyo kunye nenkonzo engenakuthelekiswa nanto ethi, ngokudibeneyo, ihambise ixabiso leprimiyamu kubathengi bethu.
Siphakamisa eyona migangatho iphezulu yesidima kuzo zonke izenzo zethu.
Sisebenza kunye ukuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu kunye nokunceda inkampani iphumelele.
Siyabaxabisa abantu bethu, siyabakhuthaza ukuba bakhule kwaye siyabavuza ngomsebenzi wabo.
Sibonisa umnqweno oqinileyo wokuphumelela kwindawo yentengiso nakuzo zonke iinkalo zeshishini lethu.
Siya kuba lelona qabane lishishini lixabisekileyo kubo bonke abathengi bethu.